मधुमेह के हो ? - स्वास्थ्य - प्रकाशितः कार्तिक २४, २०७६ - नारी
मधुमेह के हो ?
यो मधुमेह अटोइम्युन हो, यो वंशाणुगत हुन्छ । घरमा कसैलाई मधुमेह छ भने परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि मधुमेह हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । विभिन्न कारण जस्तै भाइरसको संक्रमण, प्यांक्रियाजको संक्रमण तथा इन्सुलिनको उत्पादनमा कमी वा थपघट हुँदा पनि मधुमेह हुनसक्छ । यो किसिमको मधुमेहमा चिकित्सक तथा पोषणविज्ञको सल्लाह अनुसार खानपिन तथा औषधी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यो मधुमेह विभिन्न कारणले हुन्छ । खानपिनमा कुनै समय निर्धारण नहुनु, जंकफुडको बढी प्रयोग तयारी खानेकुरा, म:म, चाउमिन, बर्गर, पिज्जा आदिको बढी सेवन तथा शारीरिक परिश्रमको कमी, अस्तव्यस्त जीवनशैली आदिका कारणले योमधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले धेरैजसो मानिसमा दोस्रो प्रकारको मधुमेह पाइएको छ ।
यो क्षणिक हुन्छ । दुर्घटनामा परेर चोटग्रस्त भएका तथा गर्भवती महिलामा टाइप–३ मधुमेह देखिन्छ । यसलाई जेस्टेसनल मधुमेह भनिन्छ । गर्भवती महिलाको हकमा शिशुको जन्मपछि तथा दुर्घटनामा परेकाहरूको हकमा उपचारपछि यो मधुमेह आफैं ठीक हुन सक्छ ।
कस्तो खाना कति खाने ?
उमेर : आहार परामर्शका लागि बिरामीको उमेर, तौल, कामको प्रकार आदि थाहा पाउनुपर्छ । त्यसपछि बिरामीको रुचि, बानी तथा खानेकुराको समय तालिकासम्बन्धी जानकारी लिनुपर्छ ।
खानेकुराको इतिहास : २४ घण्टाको खानेकुराको तालिका थाहा पाएर मात्रै हुँदैन ३ देखि ४ दिन सम्मको खानेकुराका बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ ।
रगत जाँच गर्ने समय : कतिपय बिरामीले खाली पेटमा रगत परीक्षण तथा खानापछिको जाँच गर्दा सावधानी अपनाएका हुँदैनन् । बिरामीले हिजो–अस्ति कस्तो खानेकुरा खाएका थिए त्यसको पनि ख्याल गरी सोहीअनुसार खानेकुरा खाएर रगत परीक्षण गराउनुपर्छ ।
अन्न (कार्बोहाइड्रेट) : खानेकुराको प्रमुख स्रोत अन्न हो । चामल, मकै, गहँु, कोदो, फापर, जांै, आदि यसका प्रमुख स्रोत हुन् । मधुमेहमा रेसायुक्त खानेकुराको प्रयोग उपयुक्त मानिन्छ । हामीले दिनहुँ खानेकुराको ४० देखि ५० प्रतिशत कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ ।
गेडागुडी (प्रोटिन) : प्रोटिन, जनावर तथा वनस्पतिजन्य स्रोतबाट पाइन्छ । यो शाकाहारी तथा मांसाहारीका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ । शाकाहारीले दूध, दही, पनिर, मोही, तोफु, गेडागुडी तथा मांसाहारीले सेतो मासु (कुखुराको, छाला निकालेको) माछा, सामुद्रिक माछा, अण्डाजस्ता खानेकुराबाट प्रोटिन प्राप्त गर्छन् । प्रोटिन २५ देखि ३० प्रतिशत अथवा बिरामीको आवश्यकताअनुसार खानुपर्छ ।
चिल्लो पदार्थ : हाम्रो खानामा चिल्लो पदार्थ पनि आवश्यक हुन्छ । वनस्पतिबाट उत्पादन भएको तोरीे, सूर्यमुखी तेल, नरिवल तेल, सोयाबिन, क्यानोला तथा जैतुनको तेलबाट त्यस्तो चिल्लो प्राप्त हुन्छ । मानिसले दिनभरमा कति परिश्रम गर्नुपर्ने काम गर्छ तथा ऊ कस्ता रोगबाट पीडित छ भन्ने कुरा हेरेर मात्र चिल्लो पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । एक व्यक्तिले दिनभरिमा १५ मिलिलिटर वा महिनाभरि १ लिटरसम्म चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्न सक्छन् । भिटामिन, खनिज तत्व यसमा विभिन्न प्रकारका खनिज तत्वहरू पाइन्छन् । मौसमी तरकारी, सागपात, स्याउ, सुन्तला, मौसम, नासपाती, मेवा, सरिफा, अम्बा आदि
खान सकिन्छ ।
 मधुमेहका बिरामीका लागि शारीरिक व्यायाम आवश्यक हुन्छ ।
 यस्ता बिरामीले दैनिक जतिपटक खानेकुरा खाएको हुन्छ त्यही अनुसार हिंडडुल गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
 जुनसुकै रोग पनि औषधीले २० प्रतिशत निको पार्छ भने खानेकुरा तथा शारीरिक व्यायामले ८० प्रतिशत रोग निको हुन सक्छ । आफ्नो उमेर तथा शारीरिक अवस्थाअनुसार नियमित रूपमा योग, एरोबिक्स, पौडी, साइक्लिङ आदि गर्नुपर्छ ।
बिरामीका लागि सकारात्मक सोच निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । जतिसुकै औषधी– उपचार, ठूल्ठूला चिकित्सक कहाँ गए पनि मनमा पीर–चिन्ता लिए रोग ठीक हँुदैन । त्यसैले स्वस्थ रहन मस्तसमेत रहनुपर्छ ।
वैशाख ८, २०७७ - लकडाउनमा मधुमेह रोगीका लागि सुझाव
फाल्गुन २७, २०७६ - समस्यारहित प्रिग्नेन्सी
फाल्गुन १७, २०७६ - मधुमेह र आँखा